I-MVRK: Ukuphehlelelwa kweNdawo ebonakalayo ye-3D | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 18, 2020 NgoMvulo, Meyi 18, 2020 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo bendimenyiwe kukhenketho lwam lokuqala lwe inkomfa ebonakalayo kwi-intanethi isithuba. Ukunyaniseka, ngelixa ixesha lokutshixiza belidlala kwaye ndicinga ukuba inokuba sisixhobo esihle, bendixhalabile isenokuba lincinci geeky kwaye ayinakutsala amashishini aqhelekileyo. Ndicinga ukuba kunokuba kufana nokudlala umdlalo wevidiyo kunokuba ubekwindawo yokuntywila.
Nangona kunjalo, ukhenketho lomsebenzisi olundimemileyo ngenene lundichukumisile kwaye ndinethemba ngamava:
Ukuhamba ngokwakho -Ndikwazile ukuhamba kwisithuba, ndibukele iividiyo okanye intetho, kwaye ndizibandakanya nabantu ngokobuqu.
1: 1 Incoko -Ndikwazile ukuqalisa nokunxibelelana nabantu abakwigumbi elibonakalayo apho iincoko kunye nemiboniso ibisenzeka phakathi kwethu kungekho namnye umntu.
Amava okuntywila -Amava ewonke ebengafani nomdlalo wevidiyo konke konke, wawungenamsebenzi kwaye ubusebenziseka lula. Ndibona ngokupheleleyo umntu owayengenguye ngobuchwephesha ukuba uyonwabele.
Iposi yokutshixa -Ndibona ngokupheleleyo ezantsi kwendlela apho inkampani inokuba nomnyhadala ophilayo kunye nomsitho oqinisekileyo ngaxeshanye nobuchwephesha.
Umdlali omnye kule marike yi-MVRK, abazisa i-Vx360 kwintengiso. Iqonga lenza imeko eyakhiwe ngokwesiqhelo eguqula iwebhu ibe bubomi amava abonakalayo ekonyusa ukufikelela kunye nohlalutyo njengangaphambili.
Isebenzisa i-Vx360, i-MVRK ikhulisa imeko yeempawu zesiko ezenza ukuba amava edijithali-kuphela azive njengendawo yokwenyani yomhlaba ngemizobo ekumgangatho ophezulu kunye nokuhonjiswa nge-360-degree yokuhlola kunye nokuhamba komsitho ofana nobomi. Iindwendwe kunye nabantu abazimasa ukuhambahamba bengekho kwidesktop okanye kwizixhobo eziphathwayo, bafumana amagumbi ahlukeneyo, unxibelelwano kunye nokunye.
Iqonga le-MVRK ye-Vx360 lityebile ngokudibana kwabantu kunye namathuba okuzibandakanya kwabasebenzisi kwilayibrari yayo yeempawu ezingundoqo ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso kwiimfuno ezithile kunye namanyathelo:
Umxholo weVidiyo eFunekayo yokuSebenza (VOD)
Amandla okusasaza ngoku
Iindlela ezimbini zokudityaniswa konxibelelwano
Ukwandiswa kokulandela umkhondo
I-WebXR kunye nezinye iinkqubo eziyinyani ezixubeneyo
Amathuba okuba iimveliso zorhwebo kunye neemveliso ezahlukeneyo zinokusebenzisa njani la mava amatsha wokuntywila awunamda. Ukongezwa ngaphaya kweenkomfa kwezinye iintlobo ze-brand kunye ne-IP, njenge:
Thatha ukonwaba kwinqanaba elilandelayo -Ibhranti kumashishini afana neenkonzo zokusasaza, ifilimu kunye nokupapasha zinokuphakamisa indlela abantu abanamava ngayo kubalinganiswa nakwimigca yokuceba ngokuthatha abalandeli bangene nzulu kwihlabathi ababathandayo kwaye babavumele ukuba batyelele rhoqo njengoko befuna, xa befuna. Ukusebenza kwamaxesha amatsha okanye umxholo kwandise ukufikelela ngaphandle kwezinto eziqhelekileyo zemveli zokuvumela zonke fan yokuzibandakanya.
Nika imveliso eyazisa ukufikelela okungazange kwenziwe -Ukongeza icandelo lewebhu lokuntywila kwimveliso entsha yokuqaliswa ngoku kuthetha ngaphezulu kwewebhusayithi eyongezelelweyo. Uyilo lokwenza kusebenze alwazi mida ngemimandla eyenziwe yi-Vx360 kwaye abasebenzisi bafumana amava ophawu oluphakamileyo wokuhamba nomnikelo obonakalayo.
Guqula imicimbi yomntu kunye neenkomfa -Ngokunqongophala okutsha kokuzibandakanya kwabantu ngaphakathi, iibranti zinokudlulisa indawo yokunyanzela, umboniso okanye amava omnyhadala kwihlabathi ledijithali apho abo bazimeleyo banokuthi bajikeleze indawo ebanzi yomxholo wepremiyamu ongenakulibaleka nonxibelelanayo ovela kubaxhasi abahlukeneyo kunye namaqabane egama. Iqonga linokudityaniswa neziganeko ezenziwa buqu ukukhulisa ukufikelela kwihlabathi.
Esi sisizukulwana esilandelayo samava enqaku anentsingiselo; umgangatho omtsha ngaphandle kwemida. Itekhnoloji yinkqubela phambili ebesinayo kwimisebenzi ngaphambi kwexesha lethu elingalindelekanga nelifunekayo lotshintsho kumava edigital kunye namava. Ifanelekile ngoku, kwaye siyakholelwa ukuba iyinguqu kwindlela izinto eziphumelela ngayo kunye nokunxibelelana kwazo kuba ivumela ukuba zibonelele ngakumbi-ngobuchule, ngakumbi izinto ezintsha, amava ngakumbi. Idala amanqaku amaninzi okuchukumisa ukuzisa abalandeli abakhoyo nabakho ngakumbi kwi-brand kwimisitho ebonakalayo, iinkomfa, usebenze kunye nemiboniso.
USteve Alexander, umseki kunye neGosa eliyiNtloko lamava eMVRK
Unomdla wokubona amava eVx360 ukuba anjani?
tags: isiganekomvvumsitho obonakalayovx360
Iimpawu ezi-8 ze "V" e Brand elungileyo